DH Flexo daabacaadda | Soo saaraha mashiinka daabacan ee daabacan
Soo saaraha mashiinka farsamada farsamada
Calaamadda, kartoonada isku xiran iyo baakadka dabacsan
DH Flexo Daabacaadda Farsamada
Markii hore waxaa la aasaasay 1996, DH Flexo Daabacaadda Teknolojiyada Inc. ayaa noqotay shirkadda horseedka u ah soo saarista mashiinka daabacaadda ee Shiinaha.
Ka dib markii horumarinta sanadaha 22, DH waxay ku guulaysatay in la sii daayo mashiinnada daabacan ee farsamada casriga ah oo daboolaya suuqyada calaamadda, kartoonada wax lagu duubo iyo sidoo kale daabacaadda baakadka. Dhammaan mashiinkaan waxaa loogu talagalay inay ku siiyaan shaqada ugu deg dega ah, tayada daabacada ugu fiican iyo qashinka yar ee ugu yar.
DH-ISTEM Mashiinka daabacan ee CIlessless
DH-OFEM waa mashiinka daabacaadda casriga casriga ah ee loogu talagalay wax soosaarka badeecad tayo sare leh. Waxaa lagu dhisay fikradda xeeladeysan, oo leh xulasho caqli-gal ah oo qalabka caadiga ah.
DH-ROC Mashiinka daabacan ee qalabka casriga ah
DH-ROC waa mashiinka daabacaadda oo ah qaabka ugu sarreeya ee qalabka casriga ah ee nidaamka dardargelinta. Waa xawaaraha design waa 450m / min afjartay technology ugu horumarsan sida technology darafta, nidaamka drive gearless, Wabka 100% kormeerka tayada iwm
DH-Kirin waa makiinad daabacan oo qaabeysan oo loogu talagalay inay bixiso shaqo deg deg ah. Waa calaamaddaada dookha ugu fiican & shaqada daabacadda baakadaha dabacsan. Waxaa lagu qalabeyn karaa cutubyo badan oo ikhtiyaari ah sida dhimista-jarista, shaabad qabow, dahaadhida iyo sheeter iwm.
DH-JL 2200mm mashiinka daabacan ee foornada oo diyaar u ah dhalmada
War-saxaafadeed-DHP-FP oo ah Uganda
Mashiinka ka hor-daabacaadda DH-Jiaolong wuxuu muujiyay bandhigga Shukumiintiga Shanghai 2019 SINO.
Mashiinka mashiinka daabacaadda cusub ee DH-ROC oo cusub
Mashiinka daabacaadda cusub ee fiilada ee fiilada ah ee lagu dhejiyay Turkiga
Xuquuqda daabacaadda © 2021 DH Flexo Daabacaadda - Mawduuca WordPress ee mawduuca by GoDaddy